“Wax RAJO ah uma hayo Chelsea kulanka habeen dambe ee Barcelona.”. – Gool FM
“Wax RAJO ah uma hayo Chelsea kulanka habeen dambe ee Barcelona.”.
Byare March 13, 2018
(England) 13 Maarso 2018. Chelsea ayaa habeen dambe u safri doonta Barcelona lugta labaad ee wareega 16 ka Champions League iyadoo ay xusid mudan tahay in lugtii hore lagu kala baxay 1-1.
Falanqeeyaha Skysport Charlie Nicholas ayaa qaba in Blues lagu soo ruugi doono Camp Nou isla markaana uusan wax rajo ah siineyn.
“Haddii uu Conte u ciyaaro sidii uu sameeyay kulankii Manchester Ciyt oo kale, taa oo aan aaminahay in laga yaabo inuu sameeyo, wax raaxo ah ma heli doonaan maxaa yeelay waxay ku guul darreysan doonaan inay ka soo baxaan qeybtooda garoonka,” Nichola ayaa sidaa u sheegay Sky Sports.
“Barcelona Daafac ahaan way soo hagaagta, laakiin weli way dhaawici karaan maadaama uu weerarka ka go’an yahay.
“Waxaan aaminsanahay in haddii ay Morata ama Giroud ay weerarka ka ciyaarsiiyaan ay ugu yaraan mararka qaar kubbada kor u qaadi karaan isla markaana ay Hazard siinayaan fursada uu kubbada uga heli karo meelaha uu wax ka dhaawici karo.
“Hasayeeshee, waxaan arkaa in Conte uu heysan doono habeen kale oo jahwareer ah. Lionel Messi nasiino fiican ayuu helay si uu diyaar ugu noqdo kulankan, sidaa darteed wax rajo ah ma siinayo Chelsea.”.
"Haddii aan ahaan lahaa Real Madrid...". Mourinho oo Talo Jees Jees ah siiyay Real Madrid
Kooxda Inter Milan oo caawa daawanaysa laba laacib oo doonayso